Sida loo helo su'aal caawimaad ah oo ku saabsan furaha galitaanka | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo helo su'aal caawimaad ah erayga sirta ah ee lagu galo
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee adeegsadayaashu la kulmaan maalinteenna maanta ayaa ah tan ma xasuusto ereyada sirta ah. Ma ahan wax ku dhaca dad yar, waa dhibaato caadi ah oo caadi ah in kasta oo ay run tahay in ay jiraan habab aan lagu ilaawin ama xitaa barnaamijyada tooska ula xiriira ee na xusuusinaya furaha sirta ah, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la haysto " qorshee b ".
Xaaladdan oo kale waa wax taas wuxuu ku yimaadaa asal ahaan dhammaan Mac-yada markaa muhiim ma ahan in la helo barnaamij kale ama wax lamid ah oo la rakibo waana ikhtiyaarka naga caawin doona inaan xasuusano furaha galitaanka. Ikhtiyaarkan waxaa laga dhaqaajin karaa Nidaamka Xulashada maantana waxaan arki doonaa sida aan u sameyn karno.
Waxay ka yaryihiin laba talaabo wayna xalin karaan mushkilad markay sababo jira awgood u xasuusan wayno furaha furashada Mac-da. Xulashadan shaqsi ahaan ayaa looga hawlgaliya kombiyuutarada isticmaalayaasha kale, asxaabta ama dadka aqoonta u leh kuwa maalin uun u baahan kara waa Furaha sirta ah waa inuu ahaadaa mid aamin ah oo dhammaantood aan ansax ahayn, markaa waa muhiim in la dhigo mid adag oo waligaa ha ku celin ereyada sirta ah ee boggaga kala duwan, wax si nasiib daro ah u soo noqnoqda.
Muuji tilmaamaha ereyga sirta ah
Ikhtiyaarkan ayaa ah midka naga caawin doona haddii aan illowno furaha furaha bilowga waxaana loo hawlgeliyaa hab fudud adoo galaya Nidaamka Xulashada, adoo dhigaya isla eraygan sirta ah si aad u furto qufulka hoose kadibna dhaqaajinaya ikhtiyaarka "Muuji tilmaamaha sirta ah".
Así marka sabab uun darteed aynaan u xasuusanayn furahan sirta ah, kooxda lafteedu waxay soo jeedin doontaa su'aal / weedh aan hore u qornay si ay noogu fududaato xusuusta furaha. Doorashadan, sidaan idhi, waxay ku weyntahay dad badan waxayna ka hortagtaa dhibaatooyinka markay tahay in amaan badan la galiyo lambarka sirta cabsi laga qabo in la iloobo. Tifatirka ama buuxinta ikhtiyaarkan oo aan ku celin ereyada sirta ah ayaa ka fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo helo su'aal caawimaad ah erayga sirta ah ee lagu galo
L0vetodream wuxuu leeyahay AirPods 2 ma baabi'i doono
Kooxda fiidiyowga FaceTime ee wicitaanka spam ku soo badanaya